बैंक र वित्तिय संस्थाहरुको लाभाशं र बोनस शेयर घोषणा गर्ने क्रम संगै शेयर बजारमा तहल्काः नयाँ अर्थमन्त्री पौड्याल शेयर बजार प्रति सकारात्मक ? - Aathikbazarnews.com बैंक र वित्तिय संस्थाहरुको लाभाशं र बोनस शेयर घोषणा गर्ने क्रम संगै शेयर बजारमा तहल्काः नयाँ अर्थमन्त्री पौड्याल शेयर बजार प्रति सकारात्मक ? -
देश कोरोना कहर बीच चलिरहेको छ । करिब १ लाख ६४ हजार भन्दा बढि नेपाली कोरोना भाइरसका बिरामी परेका छन् । भने ९०० भन्दा बढि नेपालहरुले कोरोना भाइरसका कारण मृत्युवरण गरेका छन् । कोरोना कहरका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरु गिरावट मात्रै आएका छैनन, अर्थतन्त्रनै कता जाने हो ? भन्न सक्ने अवस्था छैन भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपालीहरुका महान चाडपर्व दशैं चलिरहेको छ भने तिहार, छठ जस्ता पर्व आउँदै छन् । यसै बीचमा शेयर बजारले हरियो बत्ति बलिरहेको छ । यो खुशीको पक्ष पक्कै हो ।
कोरोना भाइरसका कारण प्रायः सबै जस्तो बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले साधारण सभा गर्न सकेको छैन । तर, पनि बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले लाभाशं र बोनस शेयर धमाधम घोषणा गर्ने क्रम जारी छ । यसको प्रत्यक्ष असर शेयर बजारमा परेको कारण दशैं पछि शेयर बजारमा करोड होइन अर्व भन्दा बढिको कारोबार भएको देखिएको छ । यो अत्यन्तै राम्रो पक्ष पक्कै हो ।
कात्तिक १२ र १४ गते शेयर बजारले तहल्का नै मच्चाएको देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरु सिटिजन इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड, माच्छापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड, एनआईसी एशिया बैंक, कुमारी बैंंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड लगायत बैंकहरुले कोरोना कहर बीच राम्रो बोनस शेयर र लाभाशं घोषणा गरेका छन् । भने अरु वाणिज्य बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले लाभाशं घोषणा गर्ने क्रम जारी छ ।
मुलुकले नयाँ अर्थमन्त्री विष्णु पौड्याल पाएसंगै शेयर बजारले हरियो बत्ती बालेको अडकल काट्नेहरुको पनि कमी छैन । कोरोना कहर र चाडपर्व बीच शेयरबजारले हरियो बत्ती बाल्नुको पछाडी बैंक र वित्तिय संस्थाहरुको लोभलाग्दो लाभाशं नै भएको शेयर ज्ञाताहरुको दाबी छ ।
नयाँ अर्थमन्त्री विष्णु पौड्यालले शेयर बजारलाई सकारात्मकरुपमा लिइएको देखिन्छ अनि यो बैंक र वित्तिय संस्थाहरुको लाभाशं घोषणा गर्ने समय भएकै कारण शेयर बजारले प्रगति गरेको देखिन्छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाकै पालमा नेपालको शेयर बजार खरानी भएको तथ्य हामी बीच छ । उनीको कार्यकालभरी शेयर बजार कहिले चलायमान भएन शेयर खरिद गर्नेहरु हेर र पर्खकै अवस्थामा रहे भन्न सकिन्छ ।
देशमा कोरोना भाइरस बढेसंगै लगानीकर्ताहरु भोलि कै हुने हो भन्दै लगानी गर्न नसकिरहेको बेला फेरि नयाँ अर्थमन्त्री आएसंगै बजारले प्रगति गरेको देखिन्छ ।
नेपालको शेयर बजारले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान मात्रै हुँदैन । यसबाट राज्यले ठूलो कर समेत पाउने भएका कारण शेयर बजारलाई राज्यले चनाखो भएर सकारात्मकरुपमा लिनु पर्दछ । जनताले कमाए राज्यले कर पाउने हो । यो विर्सनु हुँदैन । सचेत भया ।
करोडौंको खर्चमा भ्रमण वर्ष २०२०’ औपचारिक उद्घाटन